क्यानाडाको भिसा - टोरन्टो मोन्ट्रियल वा भ्याकूवरमा काम गर्नुहोस्
युएई को भिसा - दुबई वा अबु धाबी मा नयाँ जीवन शुरू गर्नुहोस्
तपाईंले क्यानाडा पाउनुभयो!
क्यानाडा भिसा लिनुहोस्!
क्यानाडा भिसा - हामी क्यानाडा लाई माया गर्छौं! हामी मध्य पूर्व पृष्ठभूमिबाट आएका छौं। यद्यपि हामी आफैले सीमित छैनौं। र यदि तपाईं सोचिरहनु भएको छ कि क्यानाडामा अन्यत्र जाने तरीका छ भने, तपाईं दुबई सिटी कम्पनी र प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ एक पटक तिर्नुहोस् पाउनु भिसा + क्यानाडा मा काम। र अवश्य पनि बिना भुक्तानी कहिल्यै फेरि।
दुबई सिटी कम्पनी रोजगार भिसा वा छुट्टी, व्यवसाय भिसा, वा रोजगार खोज्ने भिसा लिनको लागी स्मार्ट तरीका हो अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूको लागि। त्यसो भए, यदि तपाईं कानूनी संगठनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईं क्यानडामा अन्यहरूसँग जडान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले निश्चित रूपमा हाम्रा सेवाहरू प्रयास गर्नु पर्छ।
दुबई सिटी कम्पनीको साथ अपग्रेड गरिएको भिसा खाताको साथ तपाईले उत्तर अमेरिका, क्यानडामा नयाँ दीर्घकालीन रोजगार र अवसरहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ।
क्यानाडामा पुन: स्थानान्तरण गर्नुहोस्!
दुबई कम्पनीको प्रिमियम भिसा खाता पहुँचले तपाईंलाई क्यानाडाको जीवनको बारेमा बढी सिक्ने आदर्श अवसर दिन्छ। हाम्रो कम्पनीले अरूको ध्यानाकर्षण गर्न मद्दत पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारीहरूको लागि समुदाय बनाउँदछ। क्यानडा जानुहोस् र अमेरिका र क्यानडामा उत्तम संसारको व्यवसाय र क्यारियर प्रबन्धकहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी मध्य पूर्वमा सबैभन्दा मान्यताप्राप्त भिसा प्रदायक हौं।
यो तपाईको उत्तरी अमेरिका यात्राको दिशामा पहिलो कदम चाल्ने अवसर हो!
हामी दुबई र अबु धाबीमा भिसा प्रदायकको लागि सबैभन्दा धेरै मान्यता प्राप्त छौं। यो तपाईको पहिलो कदम चाल्ने अवसर हो क्यानडा यात्रा! हाम्रो टोली उत्तर अमेरिकामा तपाईंको स्थानान्तरण प्रक्रियाको साथ तपाईंलाई A देखि Z सम्म मद्दतको लागि तत्पर रहेको छ। तपाईं टोरन्टो, मोन्ट्रियल वा क्यानाडा, भ्याकूवर मा उत्तर अमेरिका मा रोजगार पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो विशेषज्ञको टोली तपाईलाई रोजगारको खोजीमा मद्दत गर्न हामी सक्दो राम्रो गर्न सक्दछौं। यसबाहेक, दुबई शहर कम्पनीले सबै अतिरिक्तहरूसँग भिसा प्रक्रिया प्रबन्ध गर्दछ। उदाहरण मध्ये एक आवास र रोजगार साक्षात्कार हो।
हामी अब तपाईंलाई टिकट बुकिंग गर्न मद्दत गर्दैछौं र तपाईंको नयाँ क्यानेडाली सपनाको सुरूवातमा बस्न र कार्य गर्नको लागि ठाउँ उपलब्ध गराउँदछौं। हामीलाई आशा छ कि तपाईं क्यानाडामा टोरन्टो प्रवासीहरूमध्ये एक हुनुहुनेछ। यसका साथै तपाईले हामीलाई अझ धेरै सकारात्मक व्यक्तिहरू ल्याउनुहुनेछ जुन हामी उत्तर अमेरिकामा मद्दत गर्न र पठाउन सक्छौं।